Meydka Marxuum Ugaas Cabdraxmaan Ugaas Khaliif oo goordhow lagu aasayo deegaan ka tirsan degmada Buuloburte – STAR FM SOMALIA
Meydka allaha u naxariistee marxuum Ugaas Cabdraxmaan Ugaas Khaliif ayaa lagu wadaa in goor dhow lagu aaso deegaanka Daaro Ugaas oo ka tirsan degmada Buuluburte.
Medka ugaaska ayaa lagula tukaday janaasada garoonka kubbada cagta ee magaalada Beledweyne.
Boqolaal ruux ayaa ka qeybgalay salaada Janaasada waxana ka mid ahaa Wasiirka Amniga Qaranka Soomaaliya C/risaaq Cumar Maxamed iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka.
Meydka Ugaas Cabdraxmaan ayaa la geeyay deegaanka Halgan halkaas oo meydka la dhigay dhisme ay ku leeyihiin ehelada Ugaaska waxana lagu wadaa in loo qaado goor dhow Daaro Ugaas.
Allaha u naxariistee Ugaas C.raxmaan Ugaas Khaliif oo maalintii axada aynu kasoo gudubnay ku geriyooday magaalada Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan ayaa salaadii Janaasada kadib loo qaaday qabuuraha Daaro Ugaas,